China koqweqwe lwawo ngokuyikho futhi okumnandi yensimbi Dutch kuhhavini Ukwakha futhi Factory | ISANXIA
Koqweqwe lwawo olusebenza kahle futhi olumnandi lwenza i-ovini yase-Dutch
Incazelo:Φ305 * 90mm
umbala:Okuphinki, okuluhlaza okotshani, okusawolintshi, okuluhlaza okwesibhakabhaka, okunsomi nokuningi, konke kuye ngezidingo zakho
Imbiza yoqweqwe lwayo isetshenziswa kakhulu ekuphekeni kwasekhaya, ngoba inomphumela omuhle kakhulu wokushisa nokugcina. Ukudla kwesitishi kuyashesha kakhulu, okungakhulisa amakhono akho okupheka.
Insimbi eyakhiwe ingasetshenziswa cishe kuzo zonke izindawo zokupheka, kufaka phakathi ukufakwa, ugesi, igesi nezitofu zobumba. Ingasetshenziswa ngisho kuhhavini, kuze kufike kuma-degree angama-500!
Insimbi yensimbi engenamthungo inendawo ecwebezelayo, enganqamuki efanelekile yokuthosa, ukuthwebula, ukusongela, ukubhaka, ukubhaka nokuningi! Ukusebenzisa ukushisa okuphansi kuzovimbela ukudla ekunamatheleni. Izitsha zensimbi zingaklwebha isiphetho se-porcelain, ngakho-ke sebenzisa izitsha zokhuni, abicah noma zenayiloni.
I-porcelain glaze ebushelelezi, ehlanganiswe nensimbi eqinile, idala ama-cookware amahle ahlanganisiwe! Lokhu kuphumela kuzo zonke izinzuzo zensimbi eyakhiwe, njengokugcinwa kokushisa okuphezulu ngisho nokusatshalaliswa kokushisa, ngaphandle kokuncipha. Insimbi ene-enameled ayidingi isinongo, futhi ayimelani nokudla okune-acid ne-alkaline. Imibala ekhanyayo yangaphandle nengaphakathi elimnyama leza umbala ojabulayo ekhishini lakho!
izibambo ze-ergonomic zenza kube lula ukuhambisa noma ukuphakamisa ipani lakho. Njalo sebenzisa izigqubuthelo zikahhavini noma iziphathi zamabhodwe lapho uphatha ipani; Sebenzisa isembozo ukuze uhambe ngesikebhe bese ugcina ukudla kanye nokubhaka, ukubhaka, ukubilisa nokwenza izitshulu! Lokhu kujula kujule kune-casserole ejwayelekile engajulile.
Insimbi eyakhiwe i-ayoni iwashi lomshini wokuwasha izitsha liphephile, kepha sincoma ukuwashwa kwezandla ukugcina isiphetho esicwebezelayo. Geza ngesandla ngamanzi afudumele kanye nensipho encane.
Umbala womkhiqizo kukuwe ukuthi ungakhetha noma wenze ngendlela oyifisayo. Izinga lomkhiqizo lizohlolwa ngokuqinile yiSanxia. Izindlebe, izindonga nemibala yebhodwe kuzoqinisekisa ukuthi azikho izinkinga kuzo zonke izici. Imininingwane iyaduduza. Vele, ngaphezu kokuhlolwa kokubukeka, ukuhlolwa kobuchwepheshe bomkhiqizo nakho kuzosetshenziswa ngokuqinile. Izinga lomkhiqizo nalo liyinto esikhathazeka ngayo kakhulu.
Langaphambilini Uqweqwe lwembiza isobho imbiza yasendlini 24cm non stick koqweqwe lwensimbi cast iron imbiza stewing imbiza
Olandelayo: Ikhwalithi ephezulu yoqweqwe lwawo olungavuthiwe oluthambile lwensimbi yokuthosa ipani le-steak
i-Cast Iron Skillet enamanzi, I-xtreme Iron Skillet, eqanjwe i-Cast Iron Skillets, I-Iron Iron Skillet, uNamel Skillet, i-Iron Iron Skillet engathinti,